रामजानकी विवाह पञ्चमी मेला विधिवत् रूपमा सुरु, यस्तो छ तयारी - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार ४ : ४६
मिथिलाञ्चल क्षेत्रको धार्मिक तथा ऐतिहासिक रामजानकी विवाहपञ्चमी मेला शुक्रबारदेखि विधिवत् रूपमा सुरु भएको छ।
पौराणिक कालमा सीतारामको विवाह भएको सम्झनास्वरूप प्रत्येक वर्ष मंसिर शुक्ल पञ्चमीका दिन लाग्ने विवाह पञ्चमी मेलाको आकर्षणको केन्द्रविन्दु रहने जानकी मन्दिरलाई रंगरोगन गरिएको छ। मन्दिर प्रांगणमा सीतारामको चरित्रसम्बन्धी कथा प्रवचन सुरु भइसकेको छ।
हिन्दुहरूको अराध्यदेव सीतारामको विवाहोत्सवको रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमीमा भाग लिन भारतीय सन्त महन्थहरू जनकपुर आइपुगेको जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासले बताए।
विवाह पञ्चमीभन्दा एक दिन अगाडि भारतबाट जन्तीको रूपमा हजारौँ सन्त महन्थ जनकपुर आउने गर्छन्। तर यस वर्ष कोरोनाको महामारी कायमै रहेकाले न्यून संख्यामा भारतबाट साधुसन्त आउने भएका छन्।
पञ्चमीका दिन जनकपुरका जानकी मन्दिरका अतिरिक्त सुन्दर-सदन (रामजानकी मन्दिर), झुलन कुञ्ज, युगलविनोद कुञ्ज, प्रेम कुट्टीसहितका मठमन्दिरमा मैथली परम्पराअनुसार सीतारामको वैवाहिक कार्यक्रमको आयोजना हुने गरेको छ। ती मन्दिरहरूमा समेत विवाह पञ्चमीको तयारी भइरहेको सुन्दरसदनका महन्थ नवलकिशोर शरणले बताए। जनकपुरमा सबैभन्दा बढी तीर्थालुको आगमन हुने यस महोत्सवमा एक लाखभन्दा श्रद्धालु भक्तजन सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। तीर्थालुका लागि बस्ने, दिशा पिसाब गर्ने तथा पिउने पानी तथा सरसफाइ लागि जनकपुरधाम उपमहनगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र युवा क्लबहरूले संयुक्त्त रूपमा लिएका छन्।
सात दिवसीय रामजानकी विवाह महोत्सवको पहिलो दिन शुक्रबार नगर दर्शनको कार्यक्रम छ। भगवान राम र लक्ष्मणको प्रतीकका रूपमा एक जोडी बालबालिकालाई जानकी मन्दिरको प्रागंणबाट गाडी जनकपुरधामको परिक्रमा गराई नगर दर्शन गराइन्छ। नगर दर्शनमा पनि महिलाहरूले विभिन्न लोकगीत गाई राम र लक्ष्मणलाई फूलले स्वागत गर्ने चलन छ।
२३ मंसिरसम्म चल्ने रामजानकी विवाह महोत्सवको दोस्रो दिन शनिबार फूलबारी लीला, १९ गते धनुष यज्ञ, २० गते तिलकोत्सव, २१ गते मटकोर, २२ गते स्वयंम्बर र साँझ विवाह तथा २३ गते रामकलेवा हुनेछ। रामकलेवाका दिन जानकी मन्दिरको परिसरमा ठूलो भोजको आयोजना गरिन्छ। जसमा साधुसन्तलाई खाना खुवाई बिदाइ दिने चलन रहेको जानकी मन्दिरका छोटा महन्थ रोशन दासले बताए।
नौ दिनसम्म जनकपुरधाममा मासु मदिरा बिक्री-वितरण निषेध
विवाह पञ्चमीको अवसरमा नौ दिनका लागि जनकपुरमा माछा-मासु र मदिरा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । १७ देखि २६ मंसिरसम्म जनकपुरधाममा माछा-मासु र मदिराको बिक्री-वितरण नगर्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ। ‘जनकपुरधाममा प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार र सीमा एवं जनकपुरधामस्थित परिक्रमा र परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा-मासु र मदिराको बिक्री वितरण, सेवन तथा कारोवार गर्न पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ।
सप्ताहव्यापी मनाइने रामजानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुरधामको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। चाडपर्वकै बेला केही अप्रिय घटना हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्तकुमार रजौरेले बताए।
सुरक्षाका लागि बाहिरबाट थप चार सय पचास सुरक्षाकर्मी मगाइएको छ । बाह्रबिघा मैदान, जानकी मन्दिरलगायतका स्थानलाई सिसिटिभीले समेत निगरानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
उद्योगीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह: मल कारखाना खोल्नुस्, सरकारले सहयोग गर्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार
बागलुङ । चार वर्षीय छोरासहित बेपत्ता बागलुङको गलकोट नगरपालिका–७ मल्मकी धनकुमारी बस्नेत विक भारतको राजधानी
दिल्लीमा ६ हजार भन्दा धेरैमा संक्रमण, गत हप्ताको तुलनामा संक्रमण घट्दो
एजेन्सी।भारतको दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। दिल्ली सरकारका
युक्रेन संकट: अमेरिकी सैनिक अलर्ट, रुसले भन्यो-चिन्ता बढाउने कदम
काठमाडौं । रूसले अमेरिकाले ८ हजार ५ सय सैनिकलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्ने निर्णय चिन्ताको
भिजिट भिसामा खाडी जाँदा भोग्नुपर्ने समस्या अध्ययनका लागि सात सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा पुगि भोग्नु परेका समस्या र तिनको समाधानका लागि
बेलायतमा सवै प्रतिवन्ध हटाउने निर्णय फेब्रुअरी ११ देखि लागू हुने
लण्डन । बेलायतमा कोरोनाभाइरसको महामारी न्युनिकरणका लागि लगाइएका सवै प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था हटाइने भएको छ। अर्को
केयूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने, विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छन्। नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू,
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको खतराको दृष्टिकोणबाट थप दुई क्षेत्र छुट्टाइयो
बेइजिङ । बेइजिङले कोभिड–१९ का लागि दुई नयाँ क्षेत्रलाई मध्यम जोखिमका रूपमा छुट्ट्याएको छ। बेइजिङका
सिटामोल उपलब्धताको तत्काल प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चको आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको ट्रम्प रुप, पत्रकारलाई तुच्छ गाली गरे, भनेः कुकुरको छोरा!
अफ्रिकामा फुटबल म्याच दौरान भागदौड मच्चिँदा आठ जनाको मृत्यु
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको पेन्सन बुझ्न जब आफन्तले मृत शरीरलाई ज्युँदो भने…
अपनाउनोस् यी बानिहरू, जसले ‘हार्टअट्याक’ हुन दिँदैन
बझाङमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवलाई दलियो कालोमोसो
सरोगेसी मार्फत आमा बनेपछि प्रियंकामाथि व्यंग्यः रेडिमेड बच्चाप्रति भावना हुन्छ होला?
अहिलेको ज्वरो, रुघाखोकीको उपचार कसरी गर्ने? यस्ता छन् डाक्टरका सुझाव
पल र समिक्षाबीच फेरि लफडाः यथार्थ खुलाइदिने समिक्षाको चेतावनी
बुद्ध एयरको विमान ल्यान्ड हुन नसक्दा एक यात्रु विमान भित्रै बेहोस
प्रहरी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित, भएन १६ बर्षे पेन्सनको व्यवस्था